पोको द फल अफ द हाउस अफ हाउरमा प्रतीकविज्ञान र मनोविश्लेषण वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, कथाहरू, आतंक
हाउस अफ हाउसको पतन एक को सबै भन्दा राम्रो ज्ञात कार्य हो एडगर एलन पो र हरेक बखत म बोस्टनियन टेररको आतंकमा फर्किनु पर्छ। यस लेखमा म ती मध्येको एक अंश पुन: प्राप्ति गर्छु कलेजको काम त्यो दिनमा मैले काम गर्नुपरेको थियो। यस पटक यो धेरै लामो अवधिको अंश हो प्रतीकविज्ञान र मनोविश्लेषण निबन्ध काम को। एक महान जिज्ञासा र सानो योगदान महान पो को आंकडा मा।
2 अशरको घर
3 अशर भाइहरू
4 एक मनोविश्लेषक पो
4.1 यस पुस्तकको अंश तब प्रयोग भयो:
पहिलो व्यक्ति मा, कथावाचकले एक बच्चाको साथीलाई आफ्नो भेटको बखान गर्दछ, रोडरिक अशर, हवेलीको मालिक कम्तिमा अनौंठो। यो मानिस बिरामी छ र उसलाई आऊ र उसलाई खुशी पार्न भन्छ। ऊ आफ्नी बहिनीसँग बस्छ महिला म्याडलाइन, जो पनि छ धेरै बिरामी र त्यसैले ऊ धेरै दु: खित छ।
वर्णनकर्ता पास एक मौसम उसको साथीले आफैंलाई कुराकानी, पढ्न र संगीत सुन्न समर्पित गर्‍यो। तर एक दिन लेडी म्याडलिन बित्नुभयो, वा, कमसेकम, यस्तो देखिन्छ। तिनीहरूले उसलाई एउटा शवगृहमा, घरको तल्लो भागमा एक कोठामा छोड्नेछन्।
त्यहा बाट रोडरिक अशरले बिस्तारै आफ्नो टाउको गुमाउनेछ र बिरामी र बिरामी हुँदै एक आँधीबेहरी रात सम्म ऊ एकदम निराश हुन थाल्छ हल्ला सबै घर मा। उनलाई आश्वासन दिन, कथावाचकले पुस्तक पढ्न थाल्छ जब सम्म उसले सुन्न सक्दैन, जस्तै रुँदै र रुँदै। रोडरिक अशर, पहिले नै पागल हो, यो महसुस गर्दछ तिनीहरूले उसलाई जिउँदै गाडे र त्यो जब लेडी म्याडलिन हो यो तिनीहरूमा देखा पर्दछ, एक तथ्य छ कि precipitates आफ्नो भाइको मृत्यु। त्यो भन्दा पहिले र आसन्न घरको पतन वर्णनकर्ता पछाडि पछाडि भाग्दछ भग्नावशेष वरपरको क्षेत्रको तालमा डुब्दै।
यो जोड दिन आवश्यक छ घर को मौलिक भूमिका, किनकि क्यारेक्टरहरूमा यसको प्रभाव र यसको विपरित निर्णायक छ। पनि नकारात्मक शक्ति त्यसले त्यो प्रभावलाई देखाउँदछ र त्यसले दुई नायकको मृत्यु र भवनको विनाशमा पुर्‍याउँछ। कथाको सुरुमा त्यो बल चाँडै पत्ता लाग्छ जब कथाकारले वर्णन गर्छ उसको आगमन र शोक र उदासीको भावना यसले महान घरको दर्शन उत्पन्न गर्दछ।
निस्सन्देह, यो पहिलो प्रभाव मा, मृत्यु को भविष्यवाणी गरिएको छ किनकि जब तपाईं घर र वरपर हेर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै ताल र सुख्खा रूखहरू, तपाईं मात्र यसलाई लिन सक्नुहुन्छ समयको प्रतिरोधको अन्त्यमा केहि यस्तो छ, जस्तो त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग, अन्तिम दुई Usher। यो लेडी म्याडलिन हो, आफ्नो समय भन्दा पहिले जीवित गाडिएको, जसले घरको विनाशको कारण गर्दछ, उनको समय भन्दा अघि, र उनको भाइको मृत्यु, सबै चीज तालमा डुबेको जस्तै कहानी समाप्त हुन्छ।
जहाँसम्म, के वास्तव मा यी तत्वहरू कन्फिगर, परिस्थिति र वातावरण को रूप मा धेरै वर्णहरू, एक हो मनको राज्यको विस्तार, पोको दिमागको। यसलाई केहि प्रतीकात्मक दर्शनमा देख्न सकिन्छ, जस्तै, उदाहरणका लागि घर। घर कि यसको आवास चरित्रको कारण पहिचान गर्दछ मानव शरीर र सोच संग.
यस तरिकाले, मुखौटा मतलब हुन्छ मान्छे, मास्क जो मुनि मानिसको व्यक्तित्व हो। फरक फ्लोरहरु को प्रतीक हुन सक्छ ठाडो र ठाउँ। को उच्चतम छत र फ्लोर अनुरूप हुनेछ टाउको र विचार, जुन सचेत र निर्देशित प्रकार्यहरूमा छ। यसको विपरित, तहखाने वा तहखाने देखाउने थियो el बेहोस र सहज ज्ञान। ला सीढी हुने थियो विभिन्न साइक प्लेनहरुको मिलन को माध्यम र यसको मौलिक अर्थ निर्भर गर्दछ कि यो एक आरोही वा अवरोही दिशामा हेरिएको छ।
के स्पष्ट छ कि घर र मानव शरीर बीच एक समानता छ, विशेष गरी मा उद्घाटन। यसको एउटा प्रमाण हो शब्द वर्णनकर्ता को जब ऊशेर हवेलीको अगाडि हो, कालो विन्डोज वर्णन उसले 'को रूपमा देख्यो खाली अनुहारमा कालो आँखा"।
ताल वा भग्नावशेषमा पनि त्यस्तै हुन्छ। ताल ले लुकेका र रहस्यमय अभिव्यक्त गर्न सक्दछ। यसबाहेक, यसको पानीको सतह प्रतीक गर्न सक्छaदर्पण, वास्तविकता को एक छवि, एक वास्तविकता कि उही पानीमा डूब्यो र केवल खंडहर छोड्दछ। तिनीहरू पनि ती मतलब गर्न सक्छन् भावनाहरू वा जीवित अनुभवहरू जुन अब कुनै महत्त्वपूर्ण सम्बन्धहरू छैनन् तर त्यो अवस्थित छ बस्ने वा सोच्ने सर्तमा कुनै प्रयोग वा प्रकार्यको बाबजुद।
पात्रहरू र स्थितिको सम्बन्धमा जुन लेखकले एक कथावाचकको रूपमा लिन्छन् निर्णायक रूपमा हस्तक्षेप गर्दैन कथामा वा नायकको भाग्यमा। यो पो जस्तो देखिन्छ उसले आफ्नो व्यक्तिगत जटिलता को केही बहाएको छ यसलाई मूर्त रूप दिने वा बरु यसको प्रतिबिम्बित गर्दै, रोडरिक र म्याडलिनमा, विशेष गरी पूर्वमा
यो शाब्दिक भएको छ खोलियो र अर्को अंश एक दर्शकको रूपमा छोडियो। रोडरिक रोग र डिमेंशिया पोको हो कि, उहाँलाई धन्यवाद वा उसको आँखाको माध्यमबाट, तिनीहरू बाहिर जान सक्छन्, आफैलाई स्वतन्त्र गर्न सक्छन् र लेखकका लागि बोझ हुन रोक्न सक्छन्।
लेडी म्याडलिन उनको भावना को कमजोरी मूर्त रूप थियो। यो पनि उसकी आमाको व्यक्तित्व हुनेछ त्यो देखा पर्छ र घर कोरीडोरहरू मार्फत गायब हुन्छ पोको दिमागबाट, सफलता बिना जीवनमा फर्कने प्रयासमा। कथाको तालको सबै परिवर्तनहरू लेडी म्याडलिन वा हराएको आमाको खोजीमा पर्दछन्।
एक मनोविश्लेषक पो
तर पनि एक छ प्रयासबाट उम्कन, विनाश र मृत्युबाट उद्धारको रूपमा कथाले अन्तमा प्रदर्शन गरे। र यो त्यो तार्किक, तर्क र केन्द्रित भाग हो जुन उसले बाहिरबाट देख्यो कि त्यो गन्तव्यलाई अस्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ जुन उहाँ वास्तविकतामा जाँदै हुनुहुन्छ। यो प्रमाणित गर्दछ साँघुरो रेखा जसले पोको जीवनमा पागलपनबाट सेनिटीलाई अलग गर्‍यो र अन्तमा उनी रक्सीको दुर्व्यसनको साथ मेटाइएको थियो।
यो पनि पो भन्न को लागी पहिले एक थियो जो भन्न सकिन्छ बेहोस दिमागको विधिगत अनुसन्धान। अशेरको यो घर, यसको कालो कोठा, यसको जटिल परिदृश्य वा यसको अखाडाको बीचमा रहेको क्र्याक, त्यो बेहोश दिमागको प्रि-फ्रिडियन मोडल मानिन्छ।
जब वर्तमान समयमा मनोविश्लेषण विधि पोको कामको लागि, तिनीहरू उनको कथाहरूको साहित्यिक गुणस्तरमा कमी देख्न चाहन्छन्। तर उहि समयमा, आलोचक जसले उनको कार्यको अध्ययन गर्न जारी राख्छन् पनि उसलाई एक मान्न जारी राख्छन् सौंदर्यशास्त्रमा अग्रणी, मानव दिमागका एक अन्वेषक र एक साहित्यिक प्राविधिक.
जे भए पनि के स्पष्ट छ उनीहरूका कथाहरू स्मृतिमा नै रहेका छन् रहस्यको लागि खोजी र मानव द्वारा गरिएको आतंकको आशाको उदाहरण.
यस पुस्तकको अंश तब प्रयोग भयो:
ई। सिर्लट, प्रतीक शब्दकोश, श्रम, बार्सिलोना, १ 1988 XNUMX।
अमेरिकी साहित्यको नोर्टन काल्पनिक, न्यू योर्क, १ 1989 XNUMX।।
अनचेन पो, ईए पो द्वारा भगुवा लेखोटहरूको एक संकलन, सिटी लाइट्स पुस्तकहरू, स्यान फ्रांसिस्को, १ 1980 .०।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » पोको द फल अफ द हाउस अफ हाउरमा प्रतीकविज्ञान र मनोविश्लेषण
नमस्कार, मैले यस काममा एउटा काम गर्नुपर्‍यो र त्यहाँ दुई प्रश्नहरू छन् जुन म उत्तर दिन सक्दिन। यी हुन्: आशेर उसको साथीले के हेर्न चाहन्छ? र मैले रोमान्टिक तत्वहरूको पहिचान गर्नुपर्दछ कि तिनीहरूलाई पाठ्य उद्धरणहरूको साथ न्यायिक बनाउँनुहोस् ... म तपाईंलाई साच्चै प्रशंसा गर्दछु यदि तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने!
मारिया फ्लोरेन्स भन्यो
धेरै राम्रो महिना एक मोनोग्राफ बनाउन सेवा गरीयो
मारिया फ्लोरेन्सलाई जवाफ दिनुहोस्
लुसिया सान्चेज भन्यो
के तपाईं हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ, ऊशर आफूले बस्ने घरको बारेमा के सोच्छ?
Lucía Sánchez लाई जवाफ दिनुहोस्
यो कसरी सम्भव छ कि साहित्य मा यस्तो एक शैक्षिक लेख मा पनि हामी "कम" को व्यापक अभाव देख्न को लागी सही "कम से कम" को सट्टामा देख्नु पर्छ? यो कसरी यो भनिएको छ जब यो "कम्तिमा", "कम्तिमा", "कम्तीमा", कम्तिमा "..." कम "को एक धेरै फरक अर्थ र प्रयोग को अर्थ छ:" बूढो म हुँ , कम म fouls सहन सक्छु "; "तपाइँ जति टाढा जानुहुन्छ, त्यति नै तपाइँ फिर्ता जानु पर्छ।"